ONWEGHỊ IHE GA-EGBOCHI IKPE BUHARI NA BURATAI IKPE MAKA BIAFRA – Bruce Fein – hoo!haa!!
otu onye ọka-iwu amaara ama na mba Amịrịka bụ Bruce E. Fein ekwuela na onweghị ya ịla azụ na mbọ ya na-agba ịhụ na ekpere onye isi ala Naijira bụ Muhammadu Buhari na onye isi ndi agha ala anyị bụ ọchị-agha Tukur Yusuf Buratai tinyekwara mmadụ iri na ise ndi ọzọ ikpe n’ụlọ ikpe mba ụwa na-ahụ maka ajọ arụrụmala; maka na ha ekweghị ka ndi ọwụwa anyanwu Naijiria na-achọ nnwere onwe Biafra nwee ngagharị udo.
Nwa-amadị a kwuru ihe ndi a n’izu ụka nabọ gara aga, mgbe ọ na-agwa ọtụtụ ụmụ amala Ọwụwa anyanwụ Naijiria nọgasị na mba ọzọ okwu na Mahadum nke steeti Chikago dị na mba Amịrịka n’ụbọchị Satọdee, abalị anọ nke ọnwa asatọ n’afọ a.
N’ọgbakọ ọmụmụ ihe ahụ ha nwere, ọka-iwu bụ Fein nke ụlọ ọrụ iwu ahụ dị na Wọshịntọn amaara amara dịka “Fein & DelValle, PLLC” kọwara ka ụdị akwụkwọ ya gbara n’ụlọ ikpe dị na mpaghara nke Kọlumbia si dị. Ọ sị na akwụkwọ ya gbagidere ntarama ahụhụ ana-ata ndi nọ na mkpagbu dịka esi gbue ma taa mmadụ iri ndi sitere Ọwụwa anyanwụ ala anyị ahụhụ maka na ha na-ekwugide arụrụmala nke gọọmenti Buhari.
Ọ sịrị na ha dị mmadụ iri na isii bụ ndi kwụrụ onwe ha ga-abịa zara ọnụ ha n’ụlọ ikpe tinyekwara onye nke ọ kpọrọ nnukwu onye arụrụmala bụ Buratai. Ọ kọwara na eji nwayọọ eso ikpe ndi mmadụ ikpe, ma gaa n’ihu kwue na usoro eji ekpe ikpe chọrọ ndidi, ịdị n’otu nakwa itinye nkwado ego, ka ewee nweta mmeri
Nwa-amadị a kwuru na ndi ọwụwa-anyanwụ, bụ ndi gbara akwụkwọ kwesiri inwe nkwado ndi bigasị na mba ofesi.
Nwoke ọka-iwu a amara ama, ma bụrụkwa onye bịara ọwụwa anyanwụ Naijiria n’afọ gara aga maka ịchọ ihe akaebe, kwuputakwara mbọ ana-agba ikpokọba ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ gbasara arụrụmala nke agha nakwa mmegide emere ndi mmadụ dịka e si mee ha site na ntụzi aka onye isi ala bụ Buhari nakwa onye isi ndi agha bụ Buratai, malite n’afọ puku abụọ na iri na ise bụ mgbe onye isi ala malitere ọchịchị. Ọ sị na ihe akaebe ndi a ka-aga-ewegara ụlọ ikpe ukwu mba ụwa na-ahụ maka arụrụmala, maka iji nyocha ndi a akpụ okwu ha n’ọnụ. Ọ sịrị na onweghị ọkwa mmadụ ga-ejide ga-eme ka ọ karịa ikpe ikpe n’ụlọ ikpe ụwa a, na-ahụ maka arụrụmala, ọ bụragodu onye isi ala.
Fein kwuru na ngbanwo maọbụ ihazigharị ọchịchị nke mba Naijiria n’ụzọ ọbụla, ga-achọrịrị nkwado nke otu mba ụwa dịka esi mee ya na Namibia, Ọwụwa anyanwụ nke Timọ na ọdịda anyanwụ nke Sudan.
N’ọgbakọ ahụ ka-anọ were kwekọrịta na mbọ nke ndi ike ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke mpaghara ọwụwa-anyanwụ, ma ndi dị ndụ ma ndi nke nwụgoro anwụ, iji weta nnweru onwe na ịkwụba aka ọtọ agaghị ala n’ighi. Ha kwuru na mpaghara ahụ ga-arụpụtarịrị nnwere onwe, nke ga-adịgide.
Previous Post: MAKARFI EBEERELA ALA IGBO AKWA
Next Post: Bishọọpụ a sị lụrụ nwanyị abụọ ebutewo nsogbu n’ụka